Samsung Galaxy Note 7 ga-egosipụta Snapdragon 820 chip | Gam akporosis
Geekbench na-akwado na Samsung Galaxy Note 7 ga-ebu Snapdragon 820 mgbawa
Na August 2, Samsung Galaxy Note 7 ga-eme ka ọdịdị ya ụwa pụta nke abụọ kachasị mkpa maka afọ maka onye na-emepụta Korea na nke ahụ ga-eweghara nnukwu Samsung Galaxy S7 nke anyị mụtara n'izu gara aga na ọ karịrị nke ahụ E rere 26 nde nkeji. Afọ na-adọrọ mmasị nke Samsung na-enweta ma ọ bụrụ na ihe niile na-aga n'ihu dị ka ọ na-abịa.
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị mụtara na ahụrụ ọhụụ nke Galaxy Note 7 na weebụsaịtị Geekbench. Na ụdị a, akpọrọ SM-N930R6, o nwere mgbawa Snapdragon 820 na afọ ya a quad-isi CPU na Adreno 530 GPU ahụ na-enweta mmelite eserese doro anya. Yabụ na ọ fọrọ nke nta ka anyị kwuo na Galaxy Note 7 ga-enwe, opekata mpe, ụdị nke nwere mgbape Qualcomm.
Ma ọ bụ na ụbọchị ole na ole tupu ọbịbịa nke mmiri a, ihe atụ ọzọ nke Galaxy Note pụtara, nwere akara ngosi SM-N935F, nke ime ya bụ Exynos 8893 mgbawa ọ gbakwara elu n'ọtụtụ akụkụ nke ule ndị ọ gafere. Yabụ na ọ fọrọ nke nta ka anyị gosipụta onwe anyị tupu otu usoro ahụ na ibe anyị ahụla na Galaxy S7, nke ụdị European nwere mgbawa Exynos, ebe na nke America, ọ gafere na Qualcomm na Snapdragon 820 ahụ.
Na ụbọchị ole gara aga, egosiri ụfọdụ njirimara ya ndị fọdụrụnụ, dịka ncheta ahụ 4GB Ram, ọ bụ ezie na a ka na-atụ anya na a ga-ewepụta ya na 6 GB nke RAM. Ihe ọzọ dị na ndepụta ụdịdị ahụ bụ arụnyere gam akporo 6.0.1.
N'ikpeazụ, anyị ga-enwe nsụgharị nke Galaxy Note 7 maka United States na China nwere mgbape Snapdragon 820 ebe a ga-eji Exynos 8893 mee ihe na mpaghara ndị ọzọ dịka nke anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Geekbench na-akwado na Samsung Galaxy Note 7 ga-ebu Snapdragon 820 mgbawa